Nhau - Rimwe jasi rekucheka uswa anoshandisa iwe hauzive
Isu tinoziva kuti kune akawanda maumbirwo e makwenzi ekucheka uswa, saka zvinova zvakaoma kwazvo kwatiri kusarudza. Nzira yekusarudza mashizha ekucheka uswa? Nzira yekugadzirisa sei reza remuchina? Uye mashandisiro uye nekuchengetedza lawn mower blade? Mupepeti anotevera anounza kwauri.
Nzira yekugadzirisa sei chipenga chemushambadziro wemucheka?
Paunenge uchigadzirisa iyo blade screw yemushambadziro wecheka, inodikanwa kuti usimbise iyo sikuruu, itendeuke 1 / 4-3 / 4 kutendeuka, sikuruwa paiyo nati, shandisa washer, kana iyo washer ichigona kufamba zvinyoro nyoro, sunga iyo nati uye wotarisa padhi zvakare Kana iro banga richifamba , kana iyo sikuru yakanyanyisa, banga harifambe. Mushure mekunge zvese zvaiswa, bvunzo dhiraivha, iro banga rinomhanya kwemineti imwe, bata sikuruu neruoko rwako, rinopisa kana kupisa zvakanyanya, bhurasho rekucheka blade rinoratidza kuti iyo sikuru yakanyanyisa, ndapota chinja zvakare.
Ita basa rakanaka mukuchengetedza kwemashizha ekucheka uswa
Muchina wekucheka masora wemichini hauchakwanise kuchinjika nefomu rekusima remichero riripo, uye newadhinda bhurasho Nereza bhurasho aricheke inogona kusangana zvizere neazvino munda wemichero weeding kushanda zvinodiwa. Iko kushandiswa kwevanocheka bhurashi kumabasa ekusakura kunogona kuvandudza zvakanyanya kugona kwebasa. Iwo mabrashi ekucheka mashizha anogona kuchengetwa pasi kudzivirira kukanganiswa kwevhu, kunatsa nharaunda, kuchengetedza mvura uye kurondedzera hunyoro, uye kuwedzera ivhu rehupenyu hwezvinhu.
Mashandisiro ekushandisa brashi cutter mashizha zvakachengeteka
A. Shandisa peturu inokwanisa uye oiri yeinjini, uye chengetedza muyero wekusanganisa webrashi rekucheka (25: 1 kana 50: 1).
B. Nguva zhinji (maawa makumi maviri neshanu) tarisa uye shandura firita yemhepo uye plug plug.
C. Mushure mekushanda netangi remafuta, unofanirwa kuzorora kwemaminitsi gumi, nekuchenesa gasket rakasununguka remuchina mushure mebasa rega rega kuve nechokwadi chekuparara kwekupisa.
D. Paunenge uchichengeta, unofanirwa kuchenesa muviri, rega mafuta akasanganiswa, bharashi rinocheka rinotsva mafuta muaporizer, bvisa ipulagi, wedzera 1-2ml yemafuta musilinda, dhonza Starter 2-3 nguva, Isa iyo plug plug.
Kureba kwekiyoni kukiya kwebrashi rinocheka rinofanira kudzorwa (= 15cm). Paunenge uchishandisa banga rebrashi rekucheka blade, muyero webanga unofanirwa kuve wakasimbiswa, uye iro banga ne vibration harifanirwe kushandiswa.
(1) Tambo-yeuswa nyoro iyo iri nyore kucheka.
(2) Square blade-kunyanya kune akaomarara uye brittle matambudziko senge tsanga.
(3) Rhombus mashizha-emiti yemizambiringa, tumakwenzi tudiki, uye yakaoma.
Kuisirwa lawn mower kucheka tambo
Bvarura musoro unocheka, wobva waburitsa iyo yakakomberedza mukati uye kumonyanisa tambo yekucheka. Kureba kwetambo yekucheka hakufanirwe kunge kwakanyanya, 10-15cm yakakodzera, hazvisi nyore kurova, hazvisi nyore kudzora, uye nyore kupaza. Paunenge uchiisa, sunga pfundo pane shaft kana musoro wekucheka, uye dhonza tambo kubva kune yakatarisana nedivi, zvikasadaro tambo inozobuda panguva yekucheka; kureba kwetambo yekucheka kumacheto maviri kunofanirwa kunge kwakafanana, zvikasadaro mukana wekucheka uchapfupiswa nekuda kwekusaenzana. Mucheka wekucheka lawn tambo inokodzera chete kucheka huswa hushoma, hwakakora, kunyange huswa hwakare hwakavezwa, hunoda kucheka nejasi. Iyi inotevera nzira yekumhanyisa mhepowokuchera uswa kucheka tambo.
(1) Bvisa musoro wekucheka, pane nzvimbo yekucheka tambo mukati.
(2) Peta tambo yekucheka nepakati, isa jam panzvimbo inenge yakakuvara tambo, woimonyorodza mukati.
(3) Kana chipingamupinyi chave kuda kupera, pfuudza tambo yekucheka kubva mumatombo kumativi ese maviri.
Sarudzo ye uswa hwesvinainokosha zvikuru. Kune akasiyana zviitiko uye inoenderana lawn mower blade kusarudzwa, iwe unofanirwa kusarudza kurudyi lawn mower blade. Uye zvakare, ndinoyeuchidza munhu wese kuti iwe unofanirwa kusarudza mashizha evakagadzira saizi. Hangzhou Zhengchida Precision Machinery Co, Ltd. iri kutungamiraanogadzira gadheni michina mashizha muChina Welcome kutenga.